‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता हातमा लिन भारतले दूत पठाएर आग्रह गर्नुपर्छ’ – NepalajaMedia
काठमाडौँ। नेपालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई शान्तिपूर्ण रुपमा शक्ति हस्तान्तरणको लागि दबाब दिन उबेला भारतले करण सिंहलाई दूत पठाए जस्तै अब शाहलाई सत्ताहातमा लिन पुन: दूत पठाएर भारतले आग्रह गर्नु पर्ने आवाज भारतमा उठेको छ। भारतीय पत्रिका ‘दि टेलिग्राफ’मा एक लेख लेख्दै भारतीय सरकारका मन्त्रीपरिषदका पूर्व सचिव एस रमेशले यस्तो सन्देश प्रवाह गरेका हुन्।
रमेशले भनेका छन्, ‘करण सिंहलाई भारत सरकारले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता हस्तान्तरणको लागि आग्रह गर्न विशेष दूत बनाएर नेपाल पठाएको थियो। हुनसक्छ, सिंह फेरी राजालाई सत्ता लिनको लागि आग्रह गर्न काठमाडौं जानुपर्ने बेला भयो कि?’
जानकारहरु यसलाई ‘स्टेट-स्पन्सर्ड’ लेख हुन सक्ने बताएका छन्। सामान्यतया यस्ता ‘स्टेट-स्पन्सर्ड'(सत्ता प्रायोजित) लेखहरु कुनै नीतिमा परिवर्तन गर्नु भन्दा अघि पत्रिकाहरुमा छपाउने गरिन्छ। त्यसमा आउने प्रतिक्रियाहरुको आधारमा आगामी कुटनीतिक रणनीति तय गर्ने विश्वव्यापी मान्यता हुन्छ।
रमेशले नेपाली जनताको राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको इच्छालाई स्वीकार्दै १२ बुदें सहमतिलाई उल्टाउन भारत सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्। रमेशले अब नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनस्थापनामा अघि बढे भारतले सघाउनु पर्ने पनि बताए।
रमेशले अब भारत आफ्नो पूर्ववत नीतिमा फर्किनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। उनले राजा सहितको प्रजातन्त्रमा नै फर्किनु अब भारत र नेपाल दुवैको लागि उत्तम हुने बताए। उनि अझ अघि बढेर लेखेका छन्, ‘भारतले राजा सहितको प्रजातन्त्र र २०४७को संविधानको पुनस्थापनामा सहयोग गर्नु पर्छ।’
रमेशले १२ बुदे सहमतिको हुनुको पछाडी तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मुख्य भूमिका रहेको बताएका छन्। कोइरालाले नै राजा ज्ञानेन्द्र प्रजातन्त्रको लागि खतरा भएको भनेर भारतलाई ‘कन्भिन्स’ गरेको उनको तर्क छ।
उनि लेख्छन्, ‘१२ बुदे सहमति जसले तत्कालिन आतंककारी समूह नेकपा माओवादीलाई मुलधारको राजनीति र केहि पछि शक्तिमा लिएर आयो त्यसको मुख्य सुत्रधार स्व. गिरिजा प्रसाद कोइराला नै हुन्। उनले नै राजाले ‘कू’ गरेर प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थाको सहमति उल्लङ्घन गरेकोले राजा राख्न नसकिने कुरामा भारत सरकारलाई मनाएका थिए।’
Prevबुद्धि बंगारो के हो ? यस्ता छन् भ्रम र यथार्थ …
Nextप्रधानमन्त्री ओलीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइनडेनले पठाए यस्तो विशेष सन्देश , यस्तो छ सन्देश